आजको वलय खण्डग्रास सूर्यग्रहण कसरी लाग्दैछ ? के गर्नुहुने, के गर्न नहुने ? – " कञ्चनजंगा News "
आजको वलय खण्डग्रास सूर्यग्रहण कसरी लाग्दैछ ? के गर्नुहुने, के गर्न नहुने ?
No Comments on आजको वलय खण्डग्रास सूर्यग्रहण कसरी लाग्दैछ ? के गर्नुहुने, के गर्न नहुने ?
सूर्यग्रहणको अवधिभर खाना खानु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि कुनै वैज्ञानिक कारण छैन । यो पनि केवल अन्धविश्वास हो
← नेपाल बसेर एकल र धनाढ्य महिला लुट्ने चिनियाँहरूकाे सपना विफल → कालापानी क्षेत्र जोड्ने बाटो सर्भे गरिँदै